Hurri-Clean | Vahaolana fanadiovana lavitra sy robotic tank
Tanky madio Hurri nozzel1
Nozzel madio madio Hurri
500m3 / ora amin'ny 10 bar paompy Hurri-Clean
Paompy fanadiovana tanky ho an'ny Nozzles Hurri-Clean
Hafainganam-pitaterana flange Hurri-Clean
Ny HURRI-CLEAN FLANGE dia vokatra iray hafa ao amin'ny fianakavian'i HYDRALINK an'ny Tank Clean Tools. Ity singa ity dia mampiasa tsiranoka be dia be mankany amin'ny Haavo Haavo izay mamorona vokatra "Hurricane" ao anaty sambo fitahirizana lehibe manampy amin'ny famotehana sy fanesorana ny vazo matevina sy fotaka.
Ny vatan-tànana tsotra miaraka amin'ny tarehiny dia manao fanitsiana ny làlan'ny nozonao
(~ 130 ° isan-karazany ny hetsika) fitsangatsanganana ao amin'ny valan-javaboary. Ny fidirana flange fahitana dia nampiana mba hanamarinana ny fahadiovan'ny tanky dia nihaona talohan'ny fanesorana fitaovana na fidirana ao anaty tanky.
Raha vao apetraka, ny Hurri-Clean Flange dia azo avela maharitra mandrakizay amin'ny ho avy
Rafitra fanadiovana tank izay miasa am-pilaminana, mahomby ary novolavolaina haharitra